Shan arrimood oo ku saabsan doorashada Somaliland - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Dr Michael Walls
Waxay dalkaasi degeen ka dib markuu bilowday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya, kaas oo sababay in Somaliland ay ku dhawaaqdo in ay Soomaaliya ka "xurowday".
Faysal Cali Waraabe oo xisbiga UCID hoggaaminaya ayaa sheegay "in taageerayaasha xisbiga Waddani iyo midabkooda Huruudka u eg in uu shabahayo dharka ay xirtaan wadaadaha Buddhaha iyo in hoggaamiyahooda [Cabdiraxman Cirro] uu u egyahay Dalia Lama".
Hadalkaa wuxuu kala kulmay weerar xoog badan oo dhanka baraha bulshada ah, ayadoo dadka qaar ay ku eedeeyeen in uu jeediyay hadal "gaalaysiin ah".
Mid ka mid ah arrimaha sida wayn ay uga doodeen musharrixiinta waa heshiiskii lala saxiixday Imaaraatka Carabta ee "saldhigga military ay uga dhisaneyso Berbera".
Faysal Cali Waraabe iyo Muse Biixi Cabdi way taageersan yihiin heshiiska, waxayna sheegayaan in "aqoonsi caalami ah ay ku helayaan".
Wuxuu ragga ay is hayaan ku eedeeyay "in ay laaluush ka qaateen Imaaraatka", eedaas oo labaduba si adag ay u beeniyeen.
Maqal Maalintii ugu dambeysay ee ololaha doorashada Somaliland
Maqal Somaliland: Ololaha doorashada iyo haweenka ganacsatada ah